အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇွန် ၂၀၁၇ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇွန် ၂၀၁၇
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ဇွန် ၂၀၁၇
Posted by kai on Jun 2, 2017 in Editor's Choice, Editor's Notes, Myanmar Gazette | 22 comments
bold news June 2017 အေရာင္ရင့္မွတ္တမ္း - ဇြန္ ၂၀၁၇
By Philip Rucker and Jenna Johnson June 1 at 4:44 PM
President Trump announced Thursday afternoon that he is withdrawing the United States from the landmark Paris climate agreement,amove to honoracampaign pledge that jeopardizes America’s alliances and stymies the global effort to address the warming planet.
Trump’s decision alarmed leaders around the world, drawing swift condemnation from foreign officials as well as top U.S. environmentalists and corporate titans, who decried the U.S. exit from the Paris accord as an irresponsible abdication of American leadership.
But Trump cast his decision asa“reassertion of America’s sovereignty,” arguing that the climate pact as negotiated under President Obama was grossly unfair to the U.S. workers and companies.
Trump said the Paris accord had negative ramifications for domestic manufacturing and other industries, and put the United States ata“permanent disadvantage” with China, India and other rising powers. He said the agreement’s restrictions on future greenhouse gas emissions would be tantamount to putting America’s vast energy resources “under lock and key.”
“I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris,” Trump proclaimed inaforceful, lengthy and at times rambling speech from the Rose Garden of the White House.
Putin: Russia doesn’t hack but “patriotic” individuals might
The Russian leader admitted the possibility that some individual “patriotic” hackers could have mounted some attacks during the 2016 U.S. presidential election, but denied any Russian government involvement. The Washington Post’s Moscow correspondent Andrew Roth explains. (Jason Aldag,Andrew Roth/The Washington Post)
By Ian Phillips and Vladimir Isachenkov | AP June 1 at 12:51 PM
ST. PETERSBURG, Russia — President Vladimir Putin acknowledged that some “patriotic” individuals may have engaged in hacking but insisted Russia asacountry has never done it, and he pledged Thursday to wait out U.S. political battles to forge constructive ties with President Donald Trump.
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် မူဝါဒအဆိုပြုချက် ၄၅ ချက်တင်သွင်းခဲ့ပြီး အစုအဖွဲ့အလိုက် ကဏ္ဍများခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ၃ရ ချက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည့် မူဝါဒ ၃ရ ချက်မှာ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှ ၁၂ ချက်၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှ ၁၁ ချက်၊ လူမှုရေးကဏ္ဍမှ လေးချက်၊ မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍမှ ၁ဝ ချက်တို့ဖြစ်ပြီး သဘောတူညီချက်မရှိခဲ့ဘဲ ကျန်ရှိခဲ့သည့် အချက်အများစုမှာ နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှဖြစ်သည်။ ယင်းသဘောတူညီချက် ၃ရ ချက်အား ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း (၁) အဖြစ် အစုအဖွဲ့ငါးခုမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးစီက လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုခဲ့သည်။
ကာတာအကြောင်း ဖြည့်ပါအုံး ဗျို့။
ဆော်ဒီကို လက်နက်ရောင်း ရင်း
ကာတာနိုင်ငံနဲ့ အာရပ်ကမ္ဘာကြား.. ကူဝိတ်ကြားဝင်..။
သမ္မတကြီးထရမ့်ခမြာ.. လူလိမ်လို့ ၅ကြိမ်တိုင်တိုင်.. ကျမ်းကျိန်ပြီးအပြောခံရ။
James Comey has called Donald Trumpaliar5times today. The White House says he isn’t.
Updated 12:18 PM ET, Thu June 8, 201
(CNN)In the first hour of former FBI Director James Comey’s testimony on Capitol Hill about the nature and details of his relationship with President Donald Trump, he called the presidentaliar twice.
In his opening remarks, Comey flashed anger at Trump’s characterization of him as unpopular among the rank and file of the FBI as well as the idea that the bureau was disorganized and chaotic.
“Those were lies. Plain and simple,” Comey said flatly.
Then, when asked by Intelligence Committee Vice Chairman Mark Warner (D-Va.) why he felt the need to document his meetings with Trump when he didn’t do the same with past presidents, Comey responded: “I was honestly concerned he might lie about the nature of our meeting.”
Jun. 8, 2017, 11:41 AM
Emmanuel Macron won the French presidential election May 7. Since his victory,avideo his campaign posted in February has been making the rounds on American social media. The Facebook video was addressed to American climate scientists who feel alienated by the Trump administration. Looking straight into the camera, speaking English, Macron tells American “researchers, entrepreneurs, [and] engineers working on climate change” that they haveahome in his country.
June 15, 20179:11 AM ET
“What’s the difference between the FBI director and Mr. Snowden?” Russian President Vladimir Putin asked Thursday during his yearly live call-in show, saying that he would offer political asylum to fired FBI head James Comey in the same way Russia has sheltered former NSA contractor Edward Snowden.
By phrasingaquestion uniquely constructed for these unusual times, Putin putanew spin on the ongoing saga over Russia’s tampering in the U.S. election, links between President Trump’s inner circle and Russia, and allegations that the president tried to stop at least one line of inquiry.
Comey recently testified that Trump fired him after asking him to end the investigation into former national security adviser Michael Flynn —arequest that Comey says he memorialized in personal notes that he allowed to be leaked to the media.
“[Comey] said he’d written down his conversation with President [Trump] and handed it to the media throughafriend of his,” Putin said, according toatranslation by Radio Free Europe. “This does sound and look odd: the director ofasecurity service making records of his talks with the supreme commander and handing it over to the media throughafriend of his.”
Putin made the remark during his annual Direct Line appearance on state TV, in which he spends hours taking questions fromastudio audience and from civilians across Russia.
Russian President Vladimir Putin answers questions fromastudio audience and citizens calling in, at his annual Direct Line session on Thursday.
Comparing Comey to Snowden, Putin said, “It makes him notasecurity service director, butacivil activist advocatingacertain belief.”
He added, “By the way, if he faces any kind of prosecution in this regard, we will provide political asylum in Russia for him as well. He should be aware of that.”
Soe Tun with Nay Lin and 40 others.
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကုန်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ bank account များကိုတရုတ်အစိုးရမှ ထိန်းချုပ်(freeze)လိုက်ခြင်းကြောင့် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ
၁။ ထိခိုက်မှုပမာဏ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ
နယ်စပ်နေမြန်မာနိုင်ငံသား(လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း ဆန်၊ ပဲ၊ပြောင်း၊နှမ်း၊သကြား၊ Export လုပ်ကိုင်သူများ နှင့် မြေဩဇာ၊လယ်ထွန်စက် အစရှိသည့် import လုပ်ကိုင်သူများ) တွေရဲ့တရုတ်ဘဏ် တွင်ဖွင့်လှစ်ထား သည့် ငွေစာရင်း ရာပေါင်းများစွာကို ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲ ၂၀၁ရ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၄-၁၅ ရက်တွေမှာထိန်းချုပ် ( Freeze) ခံရပြီး
ယွမ်ငွေ သိန်းထောင်ကျာ် ခန့်
မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင် ကျပ်ဘီလီယံ ၄၀ဝကျော် freeze လုပ်ခြင်းခံရပါတယ်။
၂။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် Bank Account ဖွင့်ရတာလဲ
နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအရ တရုတ်နိုင်ငံကိုရောင်းဝယ်တဲ့အခါ တရုတ်ပြည်ရှိ bank account သုံးပြီးလုပ်ရပါတယ်။ ဆန်ရောင်းတဲ့အခါ ဆန်ကိုတရုတ်ကုန်သည်ကို အကြွေးပေးလိုက်ပြီး သူအဆင်ပြေတဲ့အခါ bank account ထဲငွေထည့်တာကိုစောင့်နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အန္တရာယ်ရှိမှန်းသိသိနဲ့ တရုတ်တွင် bank account ဖွင့်ပြီးလုပ်နေရတာပါ။ မူဆယ်ဖက်မှာ မြန်မာဘဏ်တွေ က နိုင်ငံခြားငွေ account ဖွင့်ဖို့ အစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြဘူးပါတယ်။ အကောင်အထည်မပေါ်သေးပါ။
၃။ အရင်ကော bank account ပိတ်တာရှိပါသလား
အရင်လည်း အခုလိုပိတ်ဘူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ၄-၅-၁ဝ ဦးလောက်ပါ။ ဒီလောက်တော့ပမာဏ မများပါဘူး။ လူနည်းတော့ အသံမထွက်ဘဲကြိတ်ခံ နေကြရပါတယ်။
၄။ Bank Account တွေထိန်းချုပ်ခံရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်း
မြန်မာ့ထွက်ကုန်တွေအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်အခွန် ၂% ဆောင်ပြီး တရားဝင် Export ဆိုပြီးထွက်ပေမဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ illegal import ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငွေပေးချေမှုမှာ မြန်မာပြည်ကို LC or TT လွှတ်လို့မရနိုင်ပါ။ တရုတ်အစိုးရက တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရင်း သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ bank account တွေကိုပါ freeze လုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ လတ်တလော ဘာတွေထိခိုက်နိုင်ပါသလဲ
မူဆယ်၊မန္တလေး၊ရန်ကုန်နဲ့ အခြားဆက်နွယ်နေတဲ့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေ အရင်းပြုတ်မယ်။ Bank account တွေပိတ်ခံထားရတော့ လောလောဆယ် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်ဆိုင်းလုနီးပါးဖြစ်မယ်။ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ကားတွေ အလုပ်သမားတွေ အလုပ်မရှိဖြစ်နေမယ်။ နိုင်ငံတော်ကလည်း Export ကျမယ် အခွန်ဝင်ငွေလျော့မယ်။
၆။ ရေရှည်ကော ဘာတွေထိခိုက်နိုင်မလဲ။ ဘာကြောင့်လဲ
ပြည်ပပို့ဆန်ရဲ့ ၆၀% ကျော် ပြောင်းရဲ့ ၉၉% ဖရဲ ရဲ့၉၀% သကြား ပဲ နှမ်း ရေထွက်ပစ္စည်း တွေကို နယ်စပ်ကတဆင့်တရုတ်ပြည်ကို အဓိကရောင်းချနေရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရောင်းရတာလွယ်ကူလို့ပါ။ တရုတ်ပြည်ကိုသာ ရောင်းချခွင့် မရရင် တခြားဈေးကွက်လည်းမရှာနိုင်ရင် တောင်သူလယ်သမားတွေ ပါဈေးကွက်ပျောက်တာနဲ့ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့
တရုတ်အစိုးရက ပြည်တွင်း stock များလို့ပြောင်းကို Minimum Support Price ဖြုတ်လိုက်တာလမြန်မာပြည်က ပြောင်းစိုက်တောင်သူတွေအရှုံးပေါ်ပြီးဒုက္ခရောက် ကုန်ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဏလှည့်လည်တဲ့ငွေက ကျပ်ဘီလီယံ ၂၀၀ဝ လောက်ရှိမယ်။ အခု freeze. လုပ်ခံရတဲ့ပမာဏ ကလည်း ပြည်တွင်းငွေကြေးလှည့်လည်မှုကို ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းအတာတစ်ခု အကြပ်အတည်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Domino effect နဲ့ကျန်တဲ့ကဏ္ဏတွေပါ၊လူတွေပါထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
၇။ လတ်တလော ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်ပါသလဲ
Bank account ထိန်းချုပ်ခံနေရတဲ့သူတွေကို ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ နဲ့ နယ်စပ်ဒေသကနေတင်ပို့တဲ့ လယ်ယာထွက်ကုန်တွေကို ဖမ်းဆီးတာ လျော့နည်းအောင် အစိုးရမှ ယူနန်ပြည်နယ်နဲ့ တဟုန်ပြည်နယ်ခွဲအစိုးရတို့ကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံ မှ WTO ခွဲတမ်းရအောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ WTO ခွဲတမ်းရမှအခွန်သက်သာမှာပါ။ငွေပေးချေမှုအပိုင်း အရည်အသွေးနဲ့ QC အပိုင်းတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ တရုတ်အပြင်အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပါ G to G ရောင်းချနိုင်အောင်
၉။ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ကော ညှိနှိုင်းရင်အဆင်ပြေပါ့မလား။
အပြင်မှာကြားရတဲ့ အတည်မပြုနိုင်တဲ့ သတင်းအရတော့ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရမှတာဝန်ရှိသူတွေမှတောင်းဆို လာရင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
အစိုးရက ကြားမဝင်ရင်တော့ မြန်တျန့်စီးပွါးရေးကို ထိခိုက်မယ် …
ဒေါ်လှဈေး ရွှေဈေးတွေ ကမောက်ကမဖြစ်မယ် …
နာလံထူခါစ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကိုလည်း ရိုက်ခတ်မယ် …
မြောက်ပိုင်းက လက်နက်ကိုင်တွေလည်း ထိမယ် …
ပြောမရဘူး ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ လက်နက်ကိုင်တွေကို ထိန်းချင်လို့ …
အစိုးရက တိုက်တွန်း/မီးစိမ်းပြလိုက်သလားတောင်မသိ …
အွန်လိုင်းကနေ လောင်းကစားလုပ်ခြင်းကို စစ်ဆေးရန်လို့ ဆိုတာပဲ…
ဒါပေမဲ့ ကျပ်ဘီလီယံ ၄၀ဝကျော် freeze လုပ်တာတော့ များလွန်းသလားလို့ …
China banks freeze accounts of over 100 Myanmar merchants
YANGON • Chinese banks have frozen the accounts of more than 100 commodities traders in north- east Myanmar inabid to clamp down on smuggling and illegal online gambling.
Myanmar’s government has been negotiating with Chinese officials since the accounts were suspended last week by three banks based in China’s Yunnan province, according to the state-run Global New Light of Myanmar yesterday.
Many of the accounts belonged to Myanmar merchants who trade foodstuffs, such as rice and pulses, which are often exported to China through the border town of Muse in eastern Shan state.
By Erica Werner | AP June 21 at 4:11 AM
WASHINGTON — Republicans just gotabig argument for sticking with President Donald Trump and pushing forward with dismantling “Obamacare.” And Democrats are looking almost incapable of translating the energy of their core supporters into actual election wins.
By Nathaniel Scharping | June 20, 2017 3:09 pm
Hot, Hotter or Hottest
Right now, roughly one-third of the world’s population experiences more than 20 days of deadly heatayear. That number is estimated to rise to at least 50 percent by 2100, and if carbon emissions continue unabated, dangerous heat waves could strike as much as three-fourths of the world’s population. That’s the sobering analysis outlined inanew study from University of Hawaii researchers, published in Nature Climate Change.
Angela Merkel says Europe can no longer rely on US or UK – and must ‘fight for its own destiny’
28 MAY 2017 •
Angela Merkel, the German Chancellor, has indicated Europe can no longer completely rely on its American and British allies in the wake of Brexit and the election of US President Donald Trump, declaring the continent’s destiny is in “our own hands”.
“And so, all I can say is that we Europeans must really take our destiny into our own hands.”
Referencing Brexit, she said: “Of course we need to have friendly relations with the US, and with the UK, and with other neighbours, including Russia.”
ကမ္ဘာမှာ အိနိ္ဒယက နွားနို့အထုတ်ဆုံး၊ အမဲသားအထုတ်ဆုံးတိုင်းပြည်တခုပါ။
ဒါပေမယ့်.. နိုင်ငံခြားတင်ပို့တာမှာကတော့.. ချိုင်းနားပြီးရင်.. ထိုင်းက ထိပ်ကလိုက်ပါတယ်..။
အိနိ္ဒယပြည်၊ ချိုင်းနားပြည်ရယ်… ထိုင်းပြည်ရယ်ကြားက.. မြန်မာပြည်ကလည်း.. နံပါတ်တစ်ပါပဲ..။
မြန်မာတွေ နွားနဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်တာကို ဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြောက်သွားသလဲတွေးကြည့်တော့… နွားမေတ္တာစာကို သွားတွေ့ပါတယ်..။
အဲဒါကို.. ဥပဒေဖြစ်အောင်ပြုတဲ့.. ဦးနုအစိုးရကို တွေ့ပါတယ်..။
Asia’s leading milk exporters
June 23, 2017 11:38
India is the world’s largest milk producer, with 18% of global production, followed by the U.S. and China. But when it comes to milk export, Thailand is the largest milk exporter in Asia.
Thailand is also the largest producer and exporter of dairy products in Asean.
Thailand alone sold $33.1 million worth of milk becoming the largest milk exporter in Asia, according to United States Department of Agriculture (USDA) and The World Factbook of CIA. Thailand hasaraw milk production capacity of 2,800 tonsaday, or just over one million tonnes per year (2015).
The global sales from all milk exporting countries totalled US$7.2 billion out of which Asia sold $496.2 million worth of milk during 2015. Overall, the value of milk exports was down by an average 18.1 per cent for all exporting countries since 2011 when milk shipments were valued at $8.8 billion. Year over year, the value of milk exports dropped 25.3 per cent from 2014 to 2015.
With over $24.2 million worth of production in 2015, China was the second largest milk exporter in Asia. The Rabobank report states that the biggest consumers of milk in Asia are Singapore and China, with consumption per capita equal to roughly 62 and 38 litres respectively.
South Korea exported around $17.9 million of milk. Hong Kong, Indonesia and Japan sold $15.8 million, $10.5 million and $8.5 million worth of milk respectively.
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကနေ အထက်ဘက် Khon Kaen / Khao Yai ကို သွားတဲ့လမ်းပေါ်… Pak Chong ဆိုတဲ့ အရပ်မှာ “Farm Chokchai” ဆိုတဲ့ မွေးမြူရေးခြံကြီးရှိတယ်ခင်ဗျ … ။ နွားတွေ သိုးတွေ မွေးပြီး ၊ နို့ထွက် အစားအစာ ၊ Burger , Steak တွေနဲ့ အမဲသား သိုးသား အစို/အခြောက် ၊ အမဲ/သိုး အသားပြား Sausage တွေလည်းရောင်း … ၊ ခြံထဲကို ဝင်လည်ဖို့ ဝင်ခကောက်ပြီး နွားမွေးတာ နို့ညှစ်တာ ပြစားသေးတယ် …
တိုးရစ်တွေ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေ စားသုံးသူတွေနဲ့ ကြိတ်ကြိတ်တိုး … စီးပွါးကို ဖြစ်နေတာပဲ …
သူတို့နွားတွေက မြန်တျန့်နွားတွေလို ပိန်ပိန်ပါးပါး အရွတ်များများမဟုတ်ဘူး ၊ အသားစားဖို့မွေးထားတဲ့ နိုင်ငံခြား စပ်မျိုးတွေ ။ အဲသည့်က နွားသိုးကြီးတွေ အသတ်မခံရခင် မောင်းမတွေ ရာထောင်ချီနဲ့ အားရှိတာတွေစားပြီး ဘုရင်လိုနေရတာ … အာ ဟိ
အဲဒီ ဟိန္ဒူဇာတိနွယ်ဆရာတော်ကြီး(တွေ)လက်ချက်နဲ့.. မြန်မာပြည် ဘယ်လောက်ရေတိမ်နစ်သွားသလဲ.. လူတွေသိစေချင်တာ..။
နွားကို မြင့်မြတ်သတ္တဝါအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့ အိနိ္ဒယက.. သက်သတ်လွတ်ဆိုတာ.. နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ(မလိုင်၊ဒိန်ခဲ၊ ချိစ်) အသားကုန်တီးသမို့.. သူတို့တွေရဲ့ ကလေးတွေက အဟာရပြည့်.. ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးကြပါတယ်..လို့..။
မြန်မာသက်သတ်လွတ်ကျမှ.. နွားမေတ္တာစာမိ.. ကျိန်စာသင့်ပလေတယ်..။
လူတွေမပြောနဲ့. .အိမ်ကလေဒီတောင် ပြောရင်သတ်ချင်ချင်..။ ခက်ပါ့..။
မြန်မာဆိုင်မှာ အမဲသားစတိတ်.. အစားဖရော့ဖက်ရှင်နယ်ဂျပန်ကြီးလာစားတော့ ပြောသွားတာ..။
ဘာတဲ့.. မင်းတို့ဟာက.. Beef မှမဟုတ်တာ.. Cow အသားတွေတဲ့..။
မြန်မာတွေခမြာ.. Cow အသားတွေစားနေရ..။
ဒီလအတွက် စားခွက် ၂ခွက်..
ပထမတခုက.. လဖက်သုတ်ပါ..။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုက မြန်မာဆိုင် “Burma Superstar” ကနေစလိုက်တဲ့ လဖက်သုတ်က.. နိုင်ငံကျော်ဝက်ဘ်ဆိုက် (HuffPost Lifestyle) မှာပါလာတဲ့အကြောင်းမို့.. မြန်မာ့စားစရာလဖက်သုတ်ကို… စားခွက် ၁ အဖြစ်..တင်ပါတယ်။
လဖက်သုတ်က.. အခုသတင်းစာရဲ့ ကျောဖုံးမှာကြော်ငြာထည့်ထားတဲ့ Rangoon Ruby ဆိုင်တွေမှာလည်းရောင်းပြီး.. အမေရိကန်တွေတန်းစီစားနေကြတဲ့”စားခွက်”ပါ။ သတင်းအရ Amazon.com မှာလည်း Burmese Tea Salad Kit ဆိုပြီး
Yoma Myanmar ကတင်ရောင်းနေပါတယ်။
နယူးယောက်စ် ကွင်းစ်ညဈေးတန်းဆိုင်တန်းတွေကြားမှာ.. Burmese Bites ဆိုတဲ့ လမ်းဘေးဆိုင်လေးရှိပြီး.. အဲဒီမှာ မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ ကီးမားပလာတာကို.. အမေရိကန်တွေတန်းစီစောင့်စားရတဲ့အကြောင်း…။ ဒါကိုတော့.. INSIDER food ကဖဘမှာ ဗီဒီယိုအဖြစ်တင်ထားပါတယ်..။ စားခွက် ၂ အဖြစ်..မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
ကော်မန့်တွေလိုက်ဖတ်ရင် အဲဒါက အိနိ္ဒယမူလတို့.. မစ်ဒယ်အိစ်မူလတို့ရေးထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
စားဖူးသူတွေပဲသိကြမှာကတော့ အဲဒီမူလနိုင်ငံထုတ်တွေနဲ့ အရသာမတူရေးချမတူ။ မြန်မာ့ကီးမားပလာတာရယ်လို့ ဖြစ်နေကြောင်းရယ်ပါပေါ့..။
If you are in New York, stop by the Queens Night Market and sample the Burmese Bites’ street food…yummy!
မြန်မာပလာတာလောကကို လွှမ်းမိုးထားတာက အညာသားတွေ ခီည ။ လဘက်ရည်ဆိုင်တိုင်းမှာ သူတို့က ပလာတာ အီကြာကွေး နံပြား ဆရာကြီးတွေ ။ အနှီ အညာသားမြန်မာတွေ ပလာတာ ဂျုံနယ်တာ ၊ ရိုက်တာ ၊ ကြော်တာ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပါဘူး… ။ တူရကီ အိနိ္ဒယနဲ့ မစ်ဒယ်အိစ် ကီးမားပလာတာက မြန်မာအခေါ် ချာပါတီပလိတ်ထဲ ကြက်ကင် ဆိတ်ကင် အမဲကင် နဲ့ မေရိုနီးစ် အသီးအရွက်တွေ ရောပြီး လိပ်ပေးလိုက်တာပါ ၊ Wrap လို့ အလွယ်ခေါ်ရင် ရမယ်ထင်ပါတယ် ။
ကီးမားအပါအဝင် မြန်မာပလာတာတွေက ပါကစ္စတန်စတိုင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူပါကြောင်း…
ထူးထူးခြားခြား.. မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်လုပ်ထားတဲ့ .. ယူတုချာနယ်ပါ..။
B4uChitChat တဲ့…။ အားပေးကြစေလို..။
Myanmar Gazette 103 July 2017 by myanmar8gazette on Scribd
by Press Release Jun 30, 2017, 5:05pm EDT
30 June 2017 – Yangon, Myanmar: The largest sports media property in Asian history, ONE Championship™ (ONE), electrified the Thuwunna Indoor Stadium with another blockbuster evening of authentic martial arts. The beautiful city of Yangon played host to ONE: LIGHT OF A NATION, which showcased the absolute best in local and international martial arts talent. In the main event, Aung La N Sang was crowned the new ONE Middleweight World Champion withaunanimous decision victory over Vitaly Bigdash.